समस्यालाई समाधानमा कसरी परिणत गर्ने - Victor Mochere
by एस्थर क्राउडर
मार्केटरहरू, उत्पादन डिजाइनरहरू, व्यवसाय मालिकहरू, र सम्पादकहरू के समान छन्? तिनीहरू सबै समस्याहरूसँग काम गर्छन् र तिनीहरूलाई समाधान गर्न परिकल्पनाहरू परीक्षण गर्छन्। यद्यपि, त्यहाँ समयहरू छन् जब पेशेवरहरूले मुद्दाहरूमा यति गहिरो ध्यान केन्द्रित गर्छन् कि उनीहरूले अवसरहरूको बारेमा सोच्न छोड्छन्। त्यस्ता पलहरूले व्यक्तिलाई मृत-अन्तमा राख्छ; फ्लिप-टु-एक्शन विधिले यसबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्छ।
डेनिस प्रोडक्ट डिजाइनर जेस्पर हेनरिकसनले यो विधि बनाएका हुन्। जेस्पर हेनरिकसन मूलतः ग्राहक यात्रा नक्सा विकास गर्नको लागि यो विधिको साथ आएका थिए, तर यो अन्य परिस्थितिहरूमा काम गर्न योग्य भयो। यस विधिको योजनाले समस्यालाई रिफ्रेम गर्ने, विचार उत्पन्न गर्ने र समाधानको स्केच सिर्जना गर्ने समावेश गर्दछ।
फ्लिप-टु-एक्शन विधिले 11 लगातार चरणहरू समावेश गर्दछ।
1. समस्या वा दुखाइ छान्नुहोस्
2. कारणहरू पहिचान गर्नुहोस्
3. समस्याहरूको बारेमा परिकल्पनाहरूलाई तिनीहरूको सकारात्मक विपरीतमा बदल्नुहोस्
4. परिकल्पनाहरूलाई "हामी कसरी..." मा परिणत गर्नुहोस्
5. कार्य ब्लकमा जानुहोस्
6. समाधानको तालिका बनाउनुहोस्
7. यसले कसरी र कसलाई फाइदा गर्छ वर्णन गर्नुहोस्
8. एक समाधान कोर्नुहोस् र यसले कसरी काम गर्दछ व्याख्या गर्नुहोस्
9. यसलाई कसरी जीवनमा ल्याउने निर्णय गर्नुहोस्
10. लागत अनुमान गर्नुहोस्
11. अर्को के गर्ने निर्णय गर्नुहोस्
तपाईले समाधान खोज्नु पर्ने समस्यालाई सकेसम्म सही रूपमा वर्णन गर्नुहोस्। यो महत्वपूर्ण छ:
अमूर्त परिभाषाहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। "अप्रभावी कर्पोरेट संस्कृति," समस्याको बारेमा केही बोल्दैन
विषय र उसको कार्य संग - एक तथ्य को रूप मा समस्या को रूप मा तैयार गर्न को लागी। "को/के?" प्रश्नहरूको जवाफ र "के हुन्छ?" उदाहरण को लागी: "को?" विषय र कार्य निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू के भइरहेको छ? सामाजिक सञ्जालहरूमा अनुप्रयोग साझेदारी नगर्नुहोस्
कारण सम्बन्धहरू त्याग्नुहोस्। कुनै पनि "किनभने," "किनभने," र "पछि" धेरै फरक परिस्थितिहरूमा शब्दहरूलाई धमिलो पार्छ। "प्रिपेमेन्टको कमीको कारणले नगद अन्तर थियो किनभने ग्राहकहरूले हामीलाई विश्वास गर्दैनन्" - एक वाक्यमा, त्यहाँ तीन समस्याहरू छन्! एउटा छान्नुहोस् र यसको साथ काम गर्नुहोस्। तपाईं पछि बाँकीमा फर्कन सक्नुहुन्छ
आफैलाई सोध्नुहोस्, "यो किन भइरहेको छ? कारणहरू के हुन्?" समस्याको उपस्थितिलाई व्याख्या गर्दै कम्तीमा तीनवटा परिकल्पनाहरू लेख्नुहोस्। तपाईं अनुसन्धान डेटामा भर पर्न सक्नुहुन्छ वा यसको संयन्त्रको बारेमा यथार्थवादी धारणाहरू अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ।
परिकल्पनाहरू विपरीत बनाउनुहोस् - सकारात्मक तरिकामा। यो समस्या अब अवस्थित छैन जस्तो बनाउन। यो गर्न दुई तरिकाहरू छन्:
जब "हामी प्रबन्धकलाई सम्पर्क नगरी तुरुन्तै अर्डर गर्न सक्दैनौं" मा जान्छ "हामी प्रबन्धकलाई सम्पर्क नगरी तुरुन्तै अर्डर गर्न सक्छौं" मा जान्छ जब एक साधारण अस्वीकार प्रयोग गर्नुहोस्।
यस अवस्थाको लागि आदर्श वर्णन गर्नुहोस्। "प्रयोगकर्ताहरूले अनुप्रयोगको बारेमा बिर्सन्छन्" को सट्टा, "प्रयोगकर्ताहरू दिनमा धेरै पटक अनुप्रयोग जाँच गर्छन् र एक दिन पनि नछुटाउँछन्"।
"हामी यो कसरी हासिल गर्न सक्छौं?" जस्ता प्रश्नहरूको रूपमा तीन विरोधी-परिकल्पनाहरू सुधार गर्नुहोस्। "हामी कसरी प्रबन्धक बिना द्रुत चेकआउट प्राप्त गर्न सक्छौं? हामी कसरी प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुप्रयोग परीक्षण गर्न उत्सुक बनाउन सक्छौं?"
सबैभन्दा रोमाञ्चक र आशाजनक वस्तु छान्नुहोस्, "हामी कसरी ..."। एक आदर्श उम्मेदवार एक प्रश्न हो, जसको समाधान न्यूनतम प्रयास संग अधिकतम प्रभाव दिनेछ। यदि त्यहाँ धेरै यस्ता प्रश्नहरू छन् भने, तपाइँ तिनीहरूलाई संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न लेख्नुहोस् त्यसको केही उत्तरहरू सहित। यस चरणमा, ब्रेनस्टर्म रणनीतिहरूमा कार्य गर्न राम्रो छ: प्रस्ताव विकल्पहरू, सबैभन्दा असामान्य व्यक्तिहरू पनि, तुरुन्तै आलोचना नगरी।
अवास्तविक र जटिल विकल्पहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्। सबै भन्दा सरल र एकै समयमा, बाँकीबाट व्यावहारिक जवाफ समाधान हो। यसलाई एक वा दुई वाक्यमा बनाउनुहोस् र यसलाई लेख्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं लगानीकर्ता वा प्रकाशकलाई पिच गर्दै हुनुहुन्छ। विवरण स्टार्टअप वा पुस्तकको मुख्य विचार जत्तिकै विशाल, संक्षिप्त र वैचारिक हुनुपर्छ। सकेसम्म छोटो र रचनात्मक समाधान लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। जब एक लेख समीक्षा गरिन्छ, पाठकलाई जानकारी प्रशोधन गर्न सजिलो बनाउन मुख्य बुँदाहरू लेखिन्छन्। त्यसै गरी, यो राम्रो हुनेछ यदि तपाइँ तपाइँको प्राकृतिक धारणा को लागी एक समाधान लेख्नुभयो।
पिच अन्तर्गत, निर्णयको लाभदायक प्रभावलाई संकेत गर्नुहोस्: यो नोट गर्न आवश्यक छ कि निर्णय कसलाई निर्देशित गरिएको छ, यो वास्तवमा के हो, र किन यो सार्थक हुनेछ। उदाहरण को लागी, तपाइँ निम्न लेख्न सक्नुहुन्छ: "वर्तमान साझेदारहरूले सूचीबाट आवश्यक परियोजना प्यारामिटरहरू चयन गर्न सक्षम हुनेछन्, एउटा संक्षिप्त बनाउनुहोस् र प्रबन्धकको सहभागिता बिना एउटा आवेदन पठाउनुहोस्।
कुनै पनि रूपमा समाधान कोर्नुहोस्: कथा "यो थियो - प्रक्रियामा - यो बन्यो," कार्यहरूको व्यक्तिगत विचार वा तपाइँको अवधारणा प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको मार्ग। कुनै पनि अवस्थामा, रेखाचित्रले प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ, "यो के हो?" र "के गर्दैछ?"।
समाधान कार्यान्वयनका लागि चरणहरू वर्णन गर्नुहोस्। MVP मोडेल (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादन) अनुसार तिनीहरूलाई रचना गर्न राम्रो छ - न्यूनतम कार्यक्षमता भएको उत्पादन हो। यसलाई धेरै स्रोतहरू आवश्यक पर्दैन, र एकै समयमा, यो परीक्षण गर्न सजिलो छ। कार्यहरूको न्यूनतम सेट परिभाषित गर्नु सरल छ - तपाईंले ती मध्ये मात्र छोड्नुपर्छ, जसको बिना अवधारणाको कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईं बिना गर्न सक्ने सबै कुरा बाहेक हुनुपर्छ।
1 देखि3को स्केलमा मोटे रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् कि समाधान कार्यान्वयन गर्न कति पैसा र समय लाग्छ। यहाँ दीर्घकालीन विश्लेषण र शुद्धता आवश्यक पर्दैन - मुख्य लक्ष्य भनेको विकासको पहिलो चरणको लागतहरू धेरै मोटे रूपमा योजना गर्नु हो।
यो एउटा सानो, ठोस, र सरल कार्य हुनुपर्छ जुन तपाईंले अहिले लिनुहुन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईंसँग समाधानको लागि अवधारणा छ - अर्को शब्दमा, परिकल्पना जसलाई परीक्षणको आवश्यकता छ। यो पुष्टि हुनेछ भन्ने तथ्य छैन। तपाईंले विचारलाई परिमार्जन गरेर फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सायद यसबाट केही आउँदैन। मुख्य कुरा यो होइन। तपाईले समस्याको क्षेत्रबाट अवसरको स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुभन्दा यो धेरै मूल्यवान छ र अब तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ।
आफ्नो एकाग्रता कसरी बढाउने
तपाइँको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्न प्रायोजन कसरी प्रयोग गर्ने